ज्योतिषशास्त्र : कुन कुन राशिका जोडीहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन ? – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/ज्योतिषशास्त्र : कुन कुन राशिका जोडीहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन ?
कन-कुन राशि भएका व्यक्तिहरुको जीवन सुखमय हुन्छ ? कुन-कुन राशिबीच बिवाह हुँदा उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट हुन्छ भन्ने विषयमा पनि फलादेश गरिन्छ । विवाह हुनुपूर्व मानिसहरुले वर र बधुको चिना देखाएर मात्र लगन जुराउने गर्छन् । आज हामीले कुन कुन राशि भएकाहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं-
तुला राशि भएका युवतीहरु पत्नीको रुपमा कस्ता हुन्छन् ? यसो भन्छ ज्योतिषशास्त्र !